नेपाल शेर्पा संघको छैठौं महाधिवेशन र थुप्तेन लामा शेर्पा
निमा ग्याल्जेन शेर्पा
२०७६ पौष १३, आईतबार
‘सम्पूर्ण शेर्पाहरुको चाहना, पहिचान र अधिकारसहितको शेर्पा प्रदेशको स्थापना’ भन्ने मूल मन्त्रसहित पौष ४ देखि ६ मा नेपाल शेर्पा संघको छैठौ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । प्रवासमा रहेका कारण महाधिवेशनमा सहभागि हुने अवसर प्राप्त भएन । तथापी, भद्र सहमतीका साथ अध्यक्षमा गेल्जे लामा शेर्पा, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा ङवाङ सोनाम शेर्पा र महासचिवमा लाक्पा शेर्पा ऐतिहासिक रुपमा चयन भएको छ । पदाधिकारी र सदस्यहरु गरि जम्मा ८१ जनाको कार्यकारी समिती संघको इतिहासमा उदाहारणीय बन्न सकोस, शुभकामना !
यसै प्रसङ्गमा शेर्पा संघ स्थापना (जन्म) कालको सम्झना गर्न मन लाग्यो । २०४६÷४७ साल तिर नेपालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको आगमन संगै विभिन्न जातिय संघ संस्थाको गठन र संगठीत हुने चरणले विजारोपण गर्यो ।
ईलामबाट आएर त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम बर्षको बिद्यार्थी जीवन बिताउदै थिए म ।
त्रि चन्द्र क्याम्पस उबेला सबै किसिमको मानिसहरुको जमघट हुने केन्द्र बिन्दु नै थियो । त्यसै बेला तिर सोलुखुम्बु जुनुबेसीका थुप्तेन लामा शेर्पासँग भेट हुन पुग्यो । उहाँ पहिला देखिनै शेर्पाहरुको इतिहास जोगाउने अभियानमा लाग्नु भएको रहेछ । त्यसपछि आइ ङिमी शेर्पा सोलु, श्याम सुन्दर सर सखुवासभा, पासाङ गोले भोजपुरसँग भेट भयो । साथै अन्य मित्रहरु समेत वाक्लो रुपमा जोडिनु भएको थियो । उहाँहरुको वीचमा ‘यहम्बु शेर्वा चिछोक’ जन्माउने कुरो चलिरहेको बुझेँ । त्यसमा म पनि इलामे प्रतिनिधिको रुपमा जोडिएँ ।
अभियान्तहरुसँग अब यहम्बु शेर्वा चिछोकलाई कसै गरी स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा निरन्तर लागी परेँ । कहिले त्रि–चन्द्र क्यम्पस र चिसो छिँडीमा बसेर वैठक गरियो त कहिले रत्नपार्क तिर भेला भइयो । कहिले आइ ङिमीको आल्पाइन ट्रेक्सको कार्यालयमा त कहिले भकान्जेको तेन्जिङ शेर्पाको तासी ताके ट्रेकिङमा बैठकहरु भयो । अन्ततः ‘यहम्बु शेर्पा चिछोक’ हालको नेपाल शेर्पा संघ जन्मियो ।
लगतै विधिवत रुपमा काठमाडौं जिल्ला कार्यालयमा दर्ता गरियो । साथै आदिवासी जनजाती महासघको सदस्य समेत भयो ।
लामा थुप्तेन शेर्पाले त्यो बेलामा अहिलेको शेर्पा सघको झन्डा, लोगो, छाप, लेटर प्याड आदिको अवधारण अत्यन्तै मिहेनत एवम खोज अनुसन्धान गरि गर्नु भएको थियो । लामा सघ शेर्पाहरुको बारेमा बृहत सूचन संग्रहित थियो ।
चिछोकको यावत कामहरु लामाले दिलोज्यान दिएर गर्नु भएको कुरो मेरो सम्झनामा अझै पनि ताजै छ । समग्रमा भन्नु पर्दा थुप्तेन लामा ‘यहम्बु शर्वा चिछोक’ को मेरुदन्ड हुनु हुन्थ्यो । जसले गर्दा चिछोक खडा भएर हिड्न सक्यो ।
मैले यो प्रसंग किन उठाउन खोजेको हो भने हिजोको दिनमा शेर्पा संघको लागि त्यतिका योगदान गर्नु हुने आदारणीय लामा थुप्तेन शेर्पालाई आज सघको छैठौ महाधिबेसन कतै पनि देख्न पाइएन । कसैले पनि उहाँको नाम लिइएको समेत बुझिन ।
मानिसले गुण एक पटक गर्ने हो, पटक पटक गरि रहन सक्दैन । संस्थामा सँधै क्रियाशिल हुन परिस्थितिले साथ नदिन सक्छ । त्यसो भएको हुँदा लामा थुप्तेन शेर्पाको सघ प्रतिको योगदान र गुणको कदर गरिनु पर्दछ । कुनै दिन सघको कार्यालयमा निमन्त्रणा गरेर शेर्पा समुदायको धरोहर लामा थुप्तेन शेर्पाको सम्मान हुनेमा पनि विश्वास्त छु ।
अन्तममा नेपाल शेर्पा संघ सम्पूर्ण शेर्पाहरुको आड् भरोसा र आदर्शको केन्द्र हो । त्यसैले हामी सबैले मिलेर सघको हरेक गतिविधीलाई साथ सहयोग जुटाउने प्रयास गरौ । जय शेर्पा, जय बुद्ध भगवान । दया, कारुणा, मैत्री एवम शान्तिको सन्देस चारै फैलिरहोस । शेर्पा एकता अमर रहोस् । शेर्पा समुदायको एकताले विश्वमा नयाँ सन्देश फैलाउँन सफल रहोस्, र इतिहासलाई सम्झँदै सम्मान गर्ने संस्कारको समेत विकास गरौं ।
लेखकः नेपाल शेर्पा विद्यार्थी संघ –मञ्च) का संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।
निमा ग्याल्जेन शेर्पाका अन्य लेख तथा रचनाहरु
संस्थापकको सम्झनामा शेर्पा गुम्बामा रक्तदान
मेगा बैंक आफ्नै जग्गामा निर्मित भवनको उद्घाटन
शेर्पा विद्यार्थीलाई कानूनी परामर्श
कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पाको लुकेको पाटो
संविधानलाई दिगो बनाउने हो भने संशोधन अनिवार्य
उपचारमा पनि सिण्डिकेट !
मिसेस टुरिजम विजेता शेर्पाको ‘पर्वतारोहण चासो’